‘प्रदेश ३ को राजधानी सिंहदरबारको छायाँमा हुँदैन, नुवाकोट वा रामेछाप लगे पनि हुन्छ’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
साउन २३, २०७६ बिहिबार १६:४२:४९ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डौ – प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडामा भाषण गर्दा हेटौंडाबाट राजधानी अन्यन्त्र जान नदिने भनिरहे पनि अहिले भने बोली फेर्नु भएको छ ।
यसअघिका धेरै भाषणमा हेटौंडाको राजधानी कसैले पनि सार्न नसक्ने भनिरहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले अब राजधानी ‘नुवाकोट वा रामेछाप लगे हुन्छ’ भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । यसअघि सार्वजनिक रुपमै आफ्नै कारण हेटौंडा अस्थायी राजधानी कायम रहेको र अब पनि स्थायी राजधानी हेटौंडा हुने भन्दे आएका मुख्यमन्त्री पौडेलले बोली फेर्न थाल्नु भएको छ ।
आफ्नो घर हेटौंडामा भए पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडामै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको मुख्यमन्त्री पौडेलको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो । मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौंडामा भाषण गर्दा ‘राजधानी हेटौंडा नै हो’ तर अन्त भाषण गर्दा ‘अन्तै राजधानी लगे हुन्छ’ भन्न थाल्नु भएको छ ।
प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी नुवाकोट वा रामेछापमा बनाए पनि आफूलाई आपत्ति नहुने तर, काठमाण्डौमा चाहिँ कुनै हालतमा प्रदेशको राजधानी राख्न नहुने मुख्यमन्त्री पौडेलको तर्क छ । काठमाण्डौको नयाँबानेश्वरमा बिहीबार सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सिंहदरबारको छायाँमा प्रदेशको राजधानी बनाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
अबको केही दिनभित्रै प्रदेश ३ को नाम र राजधानी सुन्न पाइने दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशको राजधानीका विषयमा यस्तो दलील प्रस्तुत गर्नुभयो :
तपाईँहरुको सबैभन्दा ठूलो जिज्ञासा राजधानीको सन्दर्भ र नामको सन्दर्भ छ । मैले के अनुरोध गरेँ भने घरपायकका आधारमा राजधानी रहँदैन । मैले चाहेर हुने भए त स्वाभाविक रुपमा हेटौंडामा हुनुपर्छ भनौंला । किनभने, मेरो घर त्यहीँ छ, मैले बाहिर भन्न अलि मिल्दैन ।
तर, म एउटा कुरा के प्रष्ट पार्छु भने राजधानीका विषयमा मेरो आफ्नो लजिक छ । जबर्जस्त लजिक छ । त्यो के हो भने मैले हेटौंडा नै चाहिन्छ भन्दिनँ, तर राजधानी यो राजधानीमा काठमाण्डौमा हुँदैन । यो मेरो निर्णय हो । यो सिंहदरबारको छायाँभित्र आएर प्रदेशको राजधानी बस्दैन ।
सिंहदरबार यहीँ छ । हामी २०–२५ वर्षसम्म राजधानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र राजधानीका जनतालाई कसरी डाइभर्ट गर्ने भन्ने विषयमै लड्यौँ । यो पपुलेसनलाई हामीले कसरी बाहिर लैजान सक्छौं र कसरी बाहिरको क्षेत्रलाई विकास गर्ने भन्ने बारेमै सोच्यौँ ।
यी सबै मान्छे काठमाण्डौमा आउने र काठमाण्डौ अस्तव्यस्त शहरको रुपमा रुपान्तरण हुने कुराको अन्त्य गर्न सबभन्दा पहिले राजधानीको पपुलेसनलाई डाइभर्ट गर्नुपर्छ । यो एउटा वैज्ञानिक आधार हो । अब २०–२५ वर्षसम्म यिनै कुरा गरेर म आएँ । अब फेरि राजधानीलाई ल्याएर काठमाण्डौमै राख्नुपर्छ भनेर मैले भनेँ भने मेरो २० वर्षको इतिहास, मैले जे कुरा गरेँ। जे लगानी गरेँ, त्यो खेर जान्छ । त्यो हुँदैन ।
राजधानी नुवाकोटमा लान पनि म तयार छु । कुनै आपत्ति छैन । हेटौंडा नै राख्नुपर्छ भन्दिनँ म । रामेछापमा यदि सम्भावना छ भने त्यहाँ पनि जाऔं । तयार होऔं । तर, के भने राजधानीहामी यस्तो ठाउँमा लैजाऔं, जहाँत्यो क्षेत्रको पनिविकास हुन सक्छ, जनताले काठमाण्डौबाहिर पनि देश हो भनेर सोच्नुपर्छ । हामीले त्यही सेवा र सुविधा दिन सक्यौँ भने काठमाण्डौमा जनता धेरै आउँदैनन् । योचाहिँ मेरो एउटा दृढ कुरा हो ।
अर्को पक्ष के हो भने म तपाईँहरुलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । २०१७–०१८ सालमा राजा महेन्द्रले बनाएका जिल्ला सदरमुकामहरु हेर्नुहोस् । प्रशासनिक भवनहरु हेर्नुहोस् । मेचीदेखि महाकालीसम्म जानुभयो भने जम्मै बोर्डर साइडमा छन् ।
किन तल–तल, तल–तल ? मास्तिर राखेको भए पनिहुन्थ्यो नि । चन्द्रनिगाहपुरमा नराखेर किन गौरमा राखियो ? सप्पै हेर्नुहोस् बोर्डरमा छन् । यसको अर्थ त्यो स्ट्राटेजिकल्ली पनि, सुरक्षाको हिसाबले, हरेक हिसाबले भन्ने पनि एउटा तर्क हो ।
त्यसैले राजधानीजस्तो विषयलाई मैले भनेर त हुने हैन, हामी दुई–चार जनाले भन्नुभन्दाप नि सिंगो यो देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा एउटा सहमति भयो भने हुन्छ । किनभने यो त दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने, दीर्घकालीन असर पार्ने कुरा हो ।
अहिले काठमाण्डौका मान्छेलाई काठमाण्डौमा हुँदा राम्रो । नजिकको हिसाबले सबै राम्रो होला । तर, के भने त्यसको व्यवस्थापकीय हिसाब र अरु हिसाबले पनि, संघीय व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले पनि राजधानी काठमाण्डौ हुँदैन र काठमाण्डौभन्दाब ाहिर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
तर, यसो भनेर मैले यहीँ नै हुनुपर्छ त भनिनँ । किनभने त्यसको संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राजधानी कहाँ बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने कुराको व्यवस्था गरिसक्या छ । प्रदेश सभाको दुईतिहाई सदस्यको बहुमतले जहाँ भन्छ, त्यहीँ बनाउने भन्या हुनाले बाटो त त्यही हो, त्यहाँ जानुपर्छ । म जाने हो । तर, त्यसमा सकेसम्म अझ एकमना, एकरुपता सबैको भयो भने भोलि राजधानी जहाँ भए पनि सबैले सहज ढंगले स्वीकार गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने मात्र मेरो चाहना हो । यसले गर्दा केही ढिला भएको हो ।
अब नामको विषयमा राजधानी नबनिकन नाम मात्रै भन्दाखेरि पनि खासै त्यति ठूलो औचित्य नहुने र तपाईहरुको पनि चित्तबुझ्दैन । नाम मात्रै निर्णय गर्यो, राजधानी के भन्ने हुन्छ । त्ससो भएको हुनाले दुइटै कुरो एकै दिन हुन्छ । जहिले भए पनि, दुई दिन हामी लगाउँदैनौं । एकै दिन, एउटै प्रस्तावमा नाम र राजधानी हुन्छ । र, यहाँ मेरो कुनै इन्ट्रेष्ट छैन । तर, सैद्धान्तिक हिसाबमा मात्रै मैले कुरा गरेको हो ।
मेरो व्यक्तिगत इन्ट्रेष्टका आधारमा राजधानी रोकिएको हैन । हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौं । अगाडि जान्छ र तपाईँहरु सबैले केही दिनभित्र अब राजधानीको नाम र स्थायी राजधानीको ठाउँ पनि सुन्न पाउनुहुनेछ ।